မြန်မာလုပ်သား၂ဝ ကားမီးလောင်သေဆုံးခဲ့သည့် နေရာတွင် ထိုင်း-မြန်မာအာဏာပိုင်များ အမျှအတန်းပေ? - Yangon Media Group
ကားမီးလောင်မှုကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမား ၂ဝ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် နေရာတွင် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအာဏာ ပိုင်များက အမျှအတန်းဝေပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခရိုင်၊ မဲဆောက်- ဘန်ကောက်သွား အာရှလမ်းမကြီး ကီလို မီတာ ၅၉ နှင့် ၆ဝ ကြားတွင် ကားမီးလောင် ကာ သေဆုံးခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ဝ အတွက် မြဝတီခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားသံအရာရှိများ၊ ¤င်းအလုပ်သမားများကို တာဝန်ယူပို့ ဆောင်ပေးသည့် အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူ တို့က ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့်အတူ အမျှ အတန်းဝေပေးမည်ဖြစ်သလို သေဆုံးသူ များသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မိသား စုဝင်များ၏ DNA နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”သေဆုံးသူတွေရဲ့ မိဘမောင်နှမတွေ ကို ခေါ်လာပြီးတော့ DNA ရဲစခန်းမှာ DNA စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာလုပ်သားတွေအတွက် ကောင်းရာသုဂတိရောက်စေဖို့ ရည်မှန်းပြီး ဆရာတော် သံဃာတော်တွေနဲ့ အမျှအ တန်းဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် သေဆုံးသူ တွေကို ထိုက်တန်တဲ့လျော်ကြေးငွေနဲ့ နစ်နာ ကြေးငွေရရှိစေဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု အ လုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးအောင်ခင်မြင့်က ဧပြီ ၂ ရက်တွင် ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် သေဆုံးသူများနှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူများအတွက် လူကယ်ပြန်ဝန် ကြီးဌာနမှ ကျပ် ၆၃ သိန်း ထောက်ပံ့ထားပြီး မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ် ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ထောက်ပံ့ငွေ များ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အခြားခံစားခွင့်များ ရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်အေဂျင်စီများနှင့် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းပေးသွားမည်ဟုသိရသည်။
မတ် ၃ဝ ရက် နံနက် ၂ နာရီခန့်က မြန်မာလုပ်သား ၄၇ ဦးတင်ဆောင်လာ သည့် မော်တော်ယာဉ်သည် မဲဆောက်မြို့ အလွန် တောင်ပေါ်မှ လမ်းအဆင်းတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကျားနှစ်ဦး နှင့် မ ၁၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ အမျိုးသမီး သုံးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် တာ့ခ်မြို့ရှိ ဆေးရုံကြီး၌ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိ သည်။ ကျန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည့် ပဲခူးမြို့နေ မဇာဇာအား အရေးပေါ် လူနာ အဖြစ် Phitsanulok ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ ဆောင်ကာ ဆေးဝါးကုသပေးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ဒေသအချို့တွင် မိုးသီးကြွေကျခြင်းနှင့် မိုးကြီးလေကြီး တိုက်ခတ်မှုများဖြစ်ပေါ် မကွေးတိုင်းေ??
တာချီလိတ်မြို့တွင် တရားမဝင် နေထိုင်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသား ကိုးဦးနှင့် လာအိုနိုင်ငံသူ တစ်ဥ